ကိုရီယားရေညှိသုတ်/ Korea seaweed salad | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ပီလောပီနံကိတ်/Cassava Cake
ရေညှိသုတ်လေးကလူနဲ့လဲတည့်တယ်။ စားလို့လဲကောင်းတယ်။ အိသက်ကseaweed stem ဂျယ်လီလိုရေညှိရှည်လေးတွေကိုပိုကြိုက်တယ်။kaiso salad လို့ yo sushi မှာရောင်းတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်စားကြည့် ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေပါထဲ့စားတာပေါ့နော်။ ခုသုတ်မှာကိုရီယား ရေညှိအစုံသုတ်လေးပါ။ လွယ်ပါတယ်နော်။ကလေး လေးတွေပါစားမှာမို့အစပ်လျှော့ထားပါတယ်။အစပ်ကြိုက်တတ်ရင်ပိုထဲ့ပါ။
Seaweed Salad isavery healthy option for human beings and delicious to eat as well. I love more ofajelly like long stem seaweed. You can try that in Yo Sushi as they name it Kaiso Salad. Well, I add anything I like when I do for myself. Let me share this easy to do Korean Seaweed Salad. Less chilli has been added for children. By all means, add more chilli if you like it.
-seaweed stem ရေညှိ၁ထုပ်
-dried seweed mix ရေညှိစုံ၁ထုပ်
– soy sauce ၁ဇွန်း(စားပွဲတင်)
ရေညှိများ seaweed mix ကို၁၅မိနစ် ရေအေး စိမ်ထားပါ။
-1 bag of seaweed stem
-1 bag of dried seaweed mix
– 1 tbl spoon of roasted white sesame
-2 tbl spoons of sugar
-1 tbl spoon of roasted crushed chilli
-1 tbl spoon of sesame oil
-1 tbl spoon of soy sauce
All the seaweed mixes are to be covered with cold water for 15 minutes.
ရေညှိseaweed stem ကိုရေအေးနဲ့ ၅ကြိမ်ခန့်ဆေးပေးပါ။
Seaweed stem are to be covered with cold water for5minutes.
သူ့အထုပ်ထဲမှာကို ဆားတွေအများကြီးပါ ပါတယ်။ အဲဒီဆားတွေကုန်အောင်ဆေးပစ်ပါ။ရေနွေးနဲ့ဆီနဲနဲထဲ့ပြီး၁၅မိနစ်လောက်ပြုတ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ရေအေး၁0မိနစ်လောက်စိမ်ထားပါ။ထို့နောက်တချို့ ရေညှိ အမျှင်လေးများ ထူနေသည်ကိုပါးအောင်ထိပ်မှလက်ဖြင့်ဆွဲခွါပေးပါ။ ပြီးကတ်ကျေးဖြင့် ၃- ၄ လက်မအရွယ်ဖြတ်ပါ။ အရှည်ကြီးများဖြစ်နေရင် စားတဲ့အခါခပ်ရမလွယ်လို့ပါ။
There is too much ofasalt in it’s bag. Wash it all down and addabit of oil and boil it for 15 minutes. Then cover it under cold water for 10 minutes. Tear apart the thick stem into thin one then cut them intoasize of 3-4 inches to ease out the difficulties in eating long stems.
ရေညှိလေးများအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် နှမ်းဖြူလှော်ပြီးသား ၁ဇွန်း၊ သကြား၂ဇွန်း၊ ကြက်သားမှုန့်၁ဇွန်း၊ ငရုတ်သီးလှော်မှုန့်၁ဇွန်း၊ သကြား၂ဇွန်း၊ နှမ်းဆီ၁ဇွန်း(စားပွဲတင်)၊ soy sauce ၁ဇွန်း(စားပွဲတင်) တို့ကိုရေညှိလေးများနဲ့အတူဇလုံတခုထဲ ထဲ့ပြီး လက်ဖြင့် နှံ့အောင် ခပ်ဖွဖွမွှေ ပြီးစားသုံးလို့ရပါပြီ။
Once all the seaweeds are ready then add them intoabowl with all the above mentioned ingredients on top of the seaweeds and mix them all lightly and enjoy.
By eithet • Posted in ကိုရီယား အစားအစာ
2 comments on “ကိုရီယားရေညှိသုတ်/ Korea seaweed salad”
21/03/2012 @ 5:10 pm
21/03/2012 @ 6:21 pm
thank u သူငယ်ချင်း…. 🙂